Mpampianatra FRAM Andramasina Fito volana tsy nandray karama
Tsy nivaha ny olan’ny Seces Hantsoina ireo filohan’ny fikambanan’ny mpianatra
Nivory be tetsy Ankatso omaly ny Seces sampana Antananarivo.
Oniversiten’Antananarivo Mananontanona ny taona fotsy
Nanapaka omaly ny fivoriamben’ny Seces, sampana Antananarivo, fa ankoatry ny fanentanana ireo mpampianatra mpikaroka mbola manohy
Fifaninanana mamorona Robot Tsy lasa any Arménie ny solontenan’i Madagasikara
Tamin’ny faran’ny herinandro teo no tokony ho niainga nankany Arménie ny ekipa malagasy Girls Robotika Madagascar izay saika hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena mamorona Robot ( Robotex Armenia 2019).
Tontolon’ny oniversite Mitokona ny Seces Antananarivo sy Toliara
Nanao fanambarana omaly ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na Seces, sampana Antananarivo, fa tsy mbola nisy vokatra azo tsapain-tanana hatramin’izao mikasika ny fangatahan’izy ireo.
Tontolon’ny fampianarana Ahiana hikorontana ireo CISCO manerana ny nosy
Mahagaga sy mampiahiahy ny zavatra misy ao amin`ny minisiteran` ny fanabeazam-pirenena (MENETP).
Fampianarana ambaratonga ambony Kivy amin’ny minisitera ry zareo Seces
Na ny mpianatra aza dia efa mahalala fa ao aorian’ny fifampidinihana hitadiavana vahaolana amin’izay olana miseho ka midona amin’ny rindrina tsy misy mihaino dia misy ny fahafahana manao ny antsoina hoe « Préavis de grève ».
Tanora Malagasy Sahirana amin’ny fitadiavana lalam-piofanana sy asa
Ny 13, 14, 15 novambra izao no hotontosaina etsy Antaninarenina ny andiany voalohany amin’ny hetsika “Salon de l’étudiant et de l’emploi” izay hifarimbonan’ny minisiteran’ny
Fito volana tsy nandray ny karamany ireo mpampianatra fram ary toy izay koa ny sefo fokontany ao amin’ny distrikan’Andramasina, hoy ny depiote voafidy tany an-toerana.
Nambarany fa tokony ho efa naloan’ny fitondram-panjakana ny karaman’ireo tompon’andraikitra ireo, fa mijaly izy ireo, satria mandoa hofan-trano sy saram-pianaran’ny zanany. Hiady mafy amin’ny tompon’andraiki-panjakana mba hanefana io karama io, ity solombavambahoaka ity, raha ny nambarany hatrany. Tokony handray mpampianatra fram na “recrutement” koa ny fanjakana ary manamaivana ny fandoavana ny karaman’ireo mpampianatra izany, hoy hatrany ity depiote ity.